NGWá ỌRỤ NGWá ỌRỤ NGWá ỌRỤ MAKA WINDOWS 10 - WINDOWS - 2019
Windows 10 nrụzi mmezi na Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Microsoft
Microsoft weputara ngwa ngwa imezi Windows 6 ọhụrụ, Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Software, bụ nke mbụ (n'oge ule) a na-akpọ Windows 10 Self-Healing Tool (ma gosipụta na netwọk ahụ abụghị nke ọma). Nakwa uru: Windows Error Correction Tools, Windows 10 Nchọpụta nsogbu Ngwaọrụ.
Na mbụ, a na-enye ọrụ iji dozie nsogbu ndị na-atụkwasị anya mgbe ị wụnye mmelite ụbọchị ncheta, Otú ọ dị, ọ nwere ike idozi ihe ndị ọzọ na njehie na ngwa ngwa, faịlụ, na Windows 10 n'onwe ya (nakwa na nsụgharị ikpeazụ, ozi pụtara na ngwá ọrụ ahụ na-edozi nsogbu na mpịakọta Mbadamba, ma arụ ọrụ niile ọ bụla na kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ).
Iji Ngwá Ọrụ Nchedo Software
Mgbe ị na-agbazi njehie, ọrụ ahụ anaghị enye onye ọrụ nhọrọ ọ bụla, arụ ọrụ niile na-akpaghị aka. Mgbe ị na-arụ ọrụ Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ, naanị ị ga-achọ ịlele igbe ahụ iji kweta nkwekọrịta ikike ma pịa "Ịga n'ihu iṅomi ma dozie" (Gaa na nyocha na ịrụzi).
O b ur u na akpochap uta ihe n 'ikpo ihe n' onw u na-adabere na n 'usoro gi (lee Windows 10 Ihe ndenyeghachi), a ga-agwa gi ka i mee ka ha nwee ike ime ihe na-ad igh i mma. Enwere m ike iji bọtịnụ "Ee, mee ka System Weghachite".
Na nzọụkwụ na-esonụ, mmezi nsogbu niile na mmezi njehie ga-amalite.
A na-enye nkọwa gbasara ihe kpọmkwem emere na mmemme ahụ nkenke. N'ezie, ihe omume ndị a na-eme (ntinye njikọ maka ntuziaka maka ime ihe a kapịrị ọnụ aka) na ọtụtụ ntinye (dịka ọmụmaatụ, emelite ụbọchị na oge na kọmputa).
Tọgharia ntọala netwọk Windows 10
Ntinyeghari ngwa oru site na iji PowerShell
Weghachite Windows 10 ụlọ ahịa na-eji wsreset.exe (esi eme ya na aka na-atụle na paragraf mbụ)
Lelee iguzosi ike n'ezi ihe nke usoro Windows 10 site n'iji disk
Kọwaa nchekwa nchekwa
Malite ntinye nke os na ngwa ngwa
Weghachite atụmatụ nchebe ntanetị
Nke ahụ bụ, n'eziokwu, ntọala niile na faịlụ usoro na-ebigharị ma ọ bụrụ na ha ebigharị usoro ahụ (dịka izoghi nrụpụta Windows 10).
Mgbe a na-egbu ya, Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ na-eme otu akụkụ nke ihe nkpuchi ahụ, na mgbe ọ gbanyeghachiri, ọ na-ebute mmelite (ọ nwere ike iwe ogologo oge). Mgbe achichachara, achọrọ ya ọzọ.
Na ule m (ma ọ bụ na usoro ọrụ kwesịrị ekwesị), usoro a emeghị ka nsogbu ọ bụla. Otú ọ dị, n'ọnọdụ ebe ịnwere ike ịchọpụta isi iyi nke nsogbu ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala mpaghara ya, ọ ka mma ịnwale iji dozie ya. (dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na Intaneti adịghị arụ ọrụ na Windows 10 - ọ ka mma ịtọgharịa ntọala netwọk ka ịmalite, kama iji ọrụ bara uru nke ga-esiteghi na ịtọgharịa nke a).
Ịnwere ike ibudata Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Microsoft site na ngwa ngwa ngwa Windows - http://www.microsoft.com/en-ru/store/p/software-repair-tool/9p6vk40286pq